Iindaba -Izixhobo eziphambili zeChina zisadinga ukungeniswa
Izixhobo eziphambili zase China kusafuneka zingeniswe
Kwiminyaka yakutshanje, ishishini lezixhobo zasekhaya liphucule kakhulu ukusuka kwinqanaba lobuchwephesha ukuya kwizalathi zokusebenza. Umzekelo, kwiinkqubo zolawulo lwezixhobo ezinkulu, amandla ashushu, amandla enyukliya, ukuhamba ngololiwe kunye nezinye iinkalo, izixhobo zasekhaya zinokutshintsha iimveliso ezingeniswe elizweni.
Ngapha koko, isantya sendawo yokuhlala kwezinye iindawo zentengiso siyakhawulezisa, kubandakanya neenkqubo zokubeka esweni okuqhubekayo kweinjini zerhasi, irhasi ye-shale kunye nokusombulula ioyile. Inkqubo yokubeka iliso, inkqubo yokujonga ukukhutshwa okuqhubekayo kweebhoyili ezitshiswa ngamalahle, njl., Zihlala kwiinkampani zaseTshayina.
Nangona imeko yokwenziwa kwishishini lezixhobo ilungile, usihlalo obekekileyo we-China Instrument kunye neMeter Industry Association, uJia Jiacheng, kutsha nje ukhumbuze ukuba uninzi lwemveliso, ukuthengisa kunye nenzuzo yamashishini Ixesha lokukhula kwamanani aphindwe kabini lidlulile. , kwaye eli shishini lingene kwixesha elitsha apho inani elincinci lamashishini liphuhlise ngokukhawuleza, uninzi lweenkampani zikhula ngokuthe tyaba okanye ngesantya esiphantsi, kwaye malunga ne-20% ilahlekelwe yimali. Okwangoku, izinto eziphambili ezinje ngokulinganisa iichips kusafuneka zingeniswe. Isizathu kukuba ukhuphiswano lwehomogenization phakathi kwamashishini lusekhona, oluthintela kakhulu uphuhliso lweshishini.
"Kwimeko yenqanaba elifanayo lobuchwephesha bezixhobo zasekhaya, inkampani ijolise kakhulu kwixabiso, nje ukuba ibeyiprojekthi, nokuba ingakanani na, Zonke iinkampani zize 'kwisiqwenga sekhekhe.' Umda wokuqala wenzuzo olinganiselweyo ulubala ngakumbi, kwaye zonke iinkampani ziyanqena ukuphoswa naliphi na ithuba lentengiso. Olu khuphiswano lwamaxabiso lungalunganga lukhokelela ngokuthe ngqo kumzi mveliso wezixhobo. Uphuhliso lwangaphakathi luyachaphazeleka. ” Utshilo uYan Zengxu.
Ukuphendula kule meko, wathi izixhobo zase China kunye namashishini emitha kufuneka aphucule umgangatho weemveliso zawo kwaye asombulule ukusombulula uzinzo kunye nokuthembeka kwezixhobo zasekhaya. Le ngxaki indala kwaye inzima, yokuqinisekisa izibonelelo zeendleko ezifanelekileyo, kunye nokufuna ngenkuthalo iindawo zentengiso yenkampani kunye nendawo yophuhliso, ukuze kugcinwe uphuhliso "lweshishini lokugqibela".
Ezinye iingcali zikholelwa ukuba amaqela amathathu emizi-mveliso aseYangtze River Delta, eChongqing naseBohai Rim kufuneka alinywe ngokukuko ukuze enze amashishini ezigidi ezi-3 ukuya kwezi-5. Kukho iinkampani ezingaphezu kwe-100 ngokuthengisa okungaphezulu kwe-1 yezigidigidi ze-yuan. Konyusa ngamandla umgangatho weemveliso zasekhaya, inani lentengiso yamashishini asekhaya kuthengiso olupheleleyo lwasekhaya lonyuke laya ngaphezulu kwe-70%, kwaye inkqubo yolawulo lwentsebenzo yohlobo lwasekhaya ifezekise imveliso yobuninzi, kwaye isabelo sentengiso sikhuphukile ukusuka kwi-5% yangoku ukuya kwi-15. %.